Venezuela vs Peru - Warbixinta ciyaaraha kubadda cagta - 15 June 2019 - ESPN - RAJO
ACCUEIL » SPORTS »Venezuela vs Peru - Warbixinta Ciyaarta - 15 Juun 2019 - ESPN
Venezuela iyo Peru waxey ku bilaabeen Copa America iyagoo barbar dhac la gashay 0-0 Sabtidii oo ay ku dhamaatay 2 gool oo ka mid ah goolasha Peruvian kadib markii la tashaday Garsooraha Garsoorka (VAR).
Himilada Christofer Gonzales daqiiqadii 11e wuxuu ahaa gool. Horaanba dhaqdhaqaaq, Jefferson Farfan waxa ay ku dhufteen daqiiqado yar oo 19 ka dib markii uu bilowday qeybtii labaad, ka dib markii madaxa uu ku dhacay goolka.
- Copa America: Wax alla wixii aad u baahan tahay inaad ogaato  - Jadwalka buuxa ee ciyaaraha Copa America
Cayaartu waxay noqotay mid aad u badan kadib markii Venezuella uu qabtay Luis Mago ku dhacay dhacdooyinka 16 laga soo bilaabo dhammaadka.
Peru waa nasiib darro. si ay u sii hayaan seddexda dhibcood, iyadoo goolhayaha reer Venezuela Burka wilwari taasoo ka dhigeysa mid cajiib ah oo aan ku dhajin karno kubada ugu fiican ee kubada gacanta ku heysa daqiiqadaha ugu dambeeya ee ciyaarta.
"Waxan yareynaa sababtoo ah waxaan u maleyneynaa inaan uqalmeyno inaan badino" ayuu yiri Kabtanka Peruvian Paulo Guer Rero. "Waxaan helnay kubbaddii ugu danbeysay.
"Waxaan sameynay wixii aan awoodno. Waxaa jirey hal gool oo keliya. "
Peru looma ogolaan inuu laba gool dhaliyo kulankii Venezuela. Getty
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa aheyd mid xiiso leh, lakiin waxyaabo waa ay fiicnaadeen qeybtii labaad ee ciyaarta iyadoo Peru ay garaacday kooxahooda. mid ka mid ah laba kooxood oo Koonfur America ah oo waligood ku guuleystay Copa America.
Isku-aadka ayaa la micno ah in labada kooxood ay ku jiraan kaalinta labaad ee Group A, oo ka dambeysay Brazil, oo garaacday Bolivia 3-0 ciyaartii ugu horeysay ee tartankaan oo Jimcaha ah.
Peru ayaa wajihi doonta Bolivia talaadada wareega labaad, halka Brazil ay wajihi doonto Venezuela isla maalintaas.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=535898
PSG - PSG: Hishiiskaas oo si xariif ah uga socdo Paris SG, Barça ayaa saadaalisay - FOOT 01
PSG: Choupo-Moting waxay dooneysaa inay joogaan - Culturebene